‘पोल्ट्रीसँगै जन्मिएँ, पोल्ट्रीमै हुर्किए’ | Vetkhabar
Home Breaking News ‘पोल्ट्रीसँगै जन्मिएँ, पोल्ट्रीमै हुर्किए’
‘पोल्ट्रीसँगै जन्मिएँ, पोल्ट्रीमै हुर्किए’
अञ्जनकुमार घिमिरे एक सफल पोल्ट्री व्यवसायी । जो जन्मिँदै पोल्ट्री व्यवसाय देख्न पाए । हुर्किंदै गएपछि त्यही व्यवसायलाई विकास र विस्तार गर्ने अवसर पाए । पोल्ट्रीसँगै रमाए, पोल्ट्रीबाटै उदाए । ३० वर्षको पोल्ट्रीको व्यवसायिक यात्रामा ५ सय देखि २५ हजार कुखुरा पालेर अब ३० हजार कुखुरा पाल्ने योजनामा रहेका उनी सफल व्यवसायी घिमिरेसँग भेट टाइम्सका राजन प्रसाईले गरेको कुराकानीको सारः
यो व्यवसायमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो ?
मेरो बुबाको पालादेखि नै हाम्रो घरमा कुखुरा पालन हुन्थ्यो । परिवारको खर्च चलाउन बुबाले कुखुरा पालन गर्नुभएको थियो । म २०३२ सालमा जन्मिएँ । त्यतिबेला ७५ ओटा कुखुरा पालेर बुबाले अलि व्यवसायिक रुपमा कुखुरा पालनको थालनी गर्नुभएको सुनाउनु भएको थियो । मेरो जन्म र हाम्रो व्यवसायिक कुखुरा पालन सँगै सुरु भएको रहेछ ।
त्यो बेला र अहिलेको कुखुरा पालन प्रविधिमा कत्तिको अन्तर पाउनु भएको छ ?
आजभन्दा ४५ वर्षअघिको त्यो कुखुरा पालनको विधि र अहिलेको विधि तथा प्रविधिमा धेरै नै अन्तर आइसकेको छ । बल्बले तातो दिनुपर्ने, माटोको भिउँट, भुडुल्को, बाँसका ढुंग्रामा दाना पानी दिने चलन थियो । तर, अहिले भुकारी, भुटर, ग्यास भुटरहरु छन् । दाना पानी दिन पनि अटोमेटिक प्लान्ट नै
विकास भइसकेको छ । धेरै नै अन्तर छ ।
पहिलो पटक कुखुरा पाल्दा कुन जातको कुखुरा पाल्नु भएको थियो ?
ब्याकक ३६० जातको लेयर्सबाट घरमा कुखुरा पालनको सुरुवात भएको थियो । ६ सय जति त्यो कुखुराको चल्ला इन्डियाबाट आएको थियो । २०४७ सलामा मैले एसएलसी दिएपछि चाहिँ हामी ब्रोइलर कुखुरा पालनमा लागेका थियौं । त्यतिबेला हामीले पालेको कुखुरा भ्याली कोल्डस्टोरले उठाउने गरेको थियो । भ्यालीसँग हामीले काम ग¥यौं । आजको यो अवस्थामा मलाई ल्याइ पु¥याउने हरिकष्ण रावलको ठूलो हात छ । त्यतिबेला म कलेज जानुअघि पनि भ्याली कोल्डस्टोरका लागि कुखुरा जोखेर मात्रै कलेज जाने गरेको थिएँ । यो इतिहास निकै लामो भइसकेको छ ।
कुकुरा पालनसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान सीप आफैं आर्जन भएको हो कि तालिम लिनुभएको छ ?
प्राक्टिस मेक अ म्यान पर्फेक्ट भनेजस्तै मलाई अभ्यासले नै पोख्त बनाउँदै ल्यायो । चल्ला, कुखुरा र उनीहरुलाई लाग्ने रोग, रोगको उपचार गर्ने भेटेरिनरी डाक्टरहरुको उपचारको तरिका, खुवाउने औषधि, दिइने खोपलगायत कुरासँग दैनिकजसो परिचित भइरहँदा कुखुरालाई लाग्ने रोग, देखिने समस्या र ती समस्या समाधानका लागि आवश्यक उपाचार विधि पनि मलाई थाहा भइसकेको छ । भलै मसँग पढेको सर्टिफिकेट भने छैन ।
कुखुरामा के कस्ता समस्या देखिने गरेको छ ?
मैले अहिले लेयर्स पालिरहेकोले लेयर्स कुखुराकै समस्याबारे कुरा गरौं । लेयर्स कुखुराका लागि भ्याक्सिनको असाध्यै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । खोरभित्रको प्राविधिक कुरा गर्दा दाना पानीको भाँडाको अवस्थिति व्यवस्थापन, चल्लाचल्लाबीचको दूरीको व्यवस्थापन जस्ता विषयमा समस्या हुने गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा चल्लाहरु थिचिएर मर्ने समस्या पनि देखिएको छ । त्यसो हुँदा चल्ला किचिन नदिन खोरभित्रको व्यवस्थापनलाई निकै ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तै, कुन सममयमा कस्तो भ्याक्सिन दिने, दाना कति दिने, पानी कति दिने जस्ता विषयलाई पनि असाध्यै महत्वका साथ लिनुपर्छ ।
१५ वर्षकै उमेरदेखि पोल्ट्रीमा लाग्नु भयो । सुरुमा कति पाल्नु हुन्थ्यो र अहिले कति पाल्नु भएको छ ?
सुरुमा बुबाले ५–६ सयबाटै यो व्यवसाय थाल्नु भएको हो । त्यतिबेला नेपालमा चल्ला नपाइने र इन्डियाबाट ल्याउने पर्ने भएकोले त्यो पनि ठूलो संख्या हुन्थ्यो । विस्तरै मैले ब्रोइलर कुखुरा भ्याली कोल्डस्टोरसँग सहकार्य गरेर पाल्न थालेपछि २५ हजारसम्म कुखुरा पालेँ । तर, त्यसबेलामा पलेट दाना निम्बसको मात्रै थियो भ्यालिको थिएन । म भ्यालीको ग्राहक भएकोले पेलेट दाना पाइएन । त्यहीबेला कुखुरामा टक्सिनले धेरै दुःख दियो । असार–साउनको बेला टक्सिनले धेरै कुखुरा मरेपछि २०६४ सालमा मैले चटक्कै ब्रोइलर पाल्न छोडेँ । त्यसपछि मैले अविनाश ह्याचरीको ३ हजार ५ सय चल्लाबाट मैले लेयर्स पाल्न थालेँ । अहिले मेरो क्षमता १५ हजार पुगिसेको छ । लकडाउनले धोका दियो नत्र मेरो क्षमता ३० हजारको पुगिसकेको हुने थियो । अर्को वर्ष मैले ३० हजार लेयर्स क्षमता पु¥याउने योजना बनाएको छु । वैशाखबाट मेरो नयाँ परियोजना सुरु हुन्छ ।
आम्दानीको हिसाबले यो व्यवसायबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
जुनसुकै व्यवसायमा पनि आम्दानी नाफाघाटा हुन्छ नै । सुन व्यापारीलाई अहिले घाटा छ । सेयर व्यापारीको अनुहार बल्ल उज्यालो हुन थालेको छ । समग्रमा आफू खटिन सक्नुपर्छ । खटिन पनि यो सेन्समा सक्नु पर्छ कि म्यानेजमेन्ट आफूले गर्न सक्नुपर्छ । कर्मचारीहरुलाई त्यही किसिमको सुविधा दिएर सन्तुष्ट बनाउन सक्नुपर्छ । यो साहुको काम होइन, आफ्नै काम हो भनेर कर्मचारीले बोध गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ । आफू अघि बसेर सबैजसो गतिविधि निगरानी गर्न सकियो भने पोल्ट्रीमा खासै घाटा हुँदैन भन्ने लाग्छ ।
साना किसान तथा व्यवसायी यो ठूला व्यवसायीबाट कार्टेलिङमा परेर व्यवसायबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको बताइरहेका छन् । यसलाई कसरी लिनु हुन्छ ?
म अण्डा उत्पादक संघमा दुई कार्यकाल केन्द्रीय कार्यसमितिमा बसेर काम गरेँ । साना किसानहरुमा टिक्ने क्षमता नै हुँदैन । समस्या त्यो हो । ५ सय हजार कुखुराबाट सुरु गर्नु भएको हुन्छ । आज राम्रो कमायो उत्साहित भइहाल्ने । घाटा लाग्यो निरुत्साहित भएर व्यवसाय छोडिहाल्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । धैर्य गर्न नसक्ने समस्या छ । सस्तैमा पनि कुखुरा तथा अण्डा बिक्री गरिहाल्ने । बजारको प्रवृत्ति र समस्याको सुक्ष्म अध्ययन गरेर चल्न नसक्ने पनि समस्या छ । काठमाडौंकै कुरा गर्दा ३ महिनासम्म अण्डा स्टोर गरेर राख्दा पनि कुहिँदैन । तर, यहाँका किसानले पनि धैर्य गर्न सकेको देखिँदैन । त्यसो हुँदा साना व्यवसयी पनि यसमा उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।
औषधि र प्राविधिकको समस्या के छ यो व्यवसायमा ?
औषधिको त्यति धेरै अभाव छैन । कहिलेकाहीँ परिस्थितिबस आवश्यक औषधि नपाइन सक्छ । त्यति धेरै समस्या छैन । तर, भेटेरिनरी डाक्टर र प्राविधिकहरुको त्यति धेरै समस्या छैन । अहिले भेटेरिनरी अध्ययन हुने कलेजहरुको संख्या नै धेरै भइसकेको छ । भेटेरिनरी डाक्टर तथा प्राविधिकहरको उत्पादन पनि बढेको छ । आवश्यकताअनुसार जुनसुकै बेला डाक्टर तथा प्राविधिक उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था छ ।
नेपालमा रोजगारीको कुनै अवसर नदेखेर विदेश जान चाहने युवालाई यो व्यवसायमा लाग्न कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ ?
म कुखुरा पाल्छु, दाना चल्ला पनि बेच्छु । विदेश गएर फर्किएका जति भाइ साथी आउनु हुन्छ उहाँहरुलाई मैले चल्ला र दाना दिएर कुखुरा पाल्न सक्ने बनाएको छु । मोटरसाइकल चढ्न सक्नेसम्म मैले बनाइ दिएको छु । मसँग काम गर्ने कोही पनि भाइसाथी डुब्नु भएको छैन । मैले दिनु पर्ने सुविधा उहाँहरुलाई दिएको छु । मसँग भएको ज्ञान उहाँहरुलाई बाँड्दा मलाई पनि राम्रै भएको छ । त्यसो हुँदा विदेश गएर सोह्र सत्र घण्टा काम गर्नुभन्दा नेपालमै काम गर्नु धेरै राम्रो हो ।
यहाँ अण्डा उत्पादक संघको कार्यसमितिमा पनि हुनुहन्छ ? कृषि तथा पशुपन्छी पालन क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारको नीतिलाई कसरी लिनु भएको छ ?
यो क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आउनु जरुरी नै छैन । स्वदेशी पूँजी लगानीले नै आत्मनिर्भर भइसकेको क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउनु कुनै आवश्यक नै नभएको कुरा हो । प्रविधि ल्याउन पर्छ । आइरहेकै पनि छ । तर, यो क्षेत्र भर्खरबामे सर्दै गरेको क्षेत्र होइन । आत्मनिर्भर भइसकेको र नेपाली पूँजीलाई नै अझ यस क्षेत्रमा विस्तार हुने वातावराण बनाउन सक्ने हो भने अझै राम्रो हुने यो क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउनु कुनै आवश्यक नै नभएको विषय हो ।
सरकारले पोल्ट्रीलाई आत्मनिर्भर बनाई राख्न र रोजगारी वृद्धि गर्न यो क्षेत्रलाई महत्व दिएको भन्दै आएको छ । सरकारी निकायसँग तपाइँको कुनै समन्वय छ ?
सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकसँग ऋणमा सहकार्य हुने गरेको छ । विगतमा कृषि विकास बैंकबाट ऋण लिएर धेरै काम अघि बढाइएको थियो । बेला बेला सरकारले गर्ने पोल्ट्री तथा पशुपन्छी पालन सम्बन्धी गोष्ठीहरुमा भाग लिने गरिन्छ । यसभन्दा बढी समन्वय भएको छैन । सरकारले सस्तो व्याजदरमा कृषि तथा पशुपन्छी पालन क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गरिहेको छ । कतिपयले चाहिँ कुखुराको खोर वा फार्म हाउस देखाएर ऋण लिने र उक्त ऋण कुखुरा व्यवसायमा नलगाई जग्गा जमिनमा लगानी गर्ने गरेको पनि देखिएको छ । सरकारले यसमा नियमन गर्न नसकेको हो कि पहुँचवालाहरुलाई खाने बाटो बनाइदिएको हो मैले बुझेको छैन ।
सरकारले अनुदानका रुपमा नगद अनुदान दिँदा ठीक हुन्छ कि उपकरण, प्रविधि तथा पूर्वाधारहरु अनुदान दिँदा ठीक हुन्छ ?
सरकारले केही चिज किन भनेर कसैलाई ५ लाख रुपैयाँ दियो भने किसानले २ लाखको त्यो चिज किन्छ र ३ लाख रमाइलो गरेर उडाउँछ । वा अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्छ । किन भने मान्छे लोभी हुन्छ । फोकटमा आएको पैसाको त्यति माया नहोला । त्यसो हुँदा प्रविधि, उपकरणहरु अनुदानकै रुपमा दियो भने त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन ऊ बाध्य हुन्छ । त्यस्ता उपकरणमा पहुँचवालाहरुले कमाईखाने भाँडो बनाउन पनि नसक्लान् भन्ने लाग्छ ।
नवनियुक्त कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा अर्याललाई भेट टाइम्समार्फत यस क्षेत्रबारे यहाँको केही सुझाव छ कि ?
मन्त्री ज्यूले मन्त्री भएर नभई किसान भएर सोच्नुपर्छ । राम्रा किसानको राय सुझाव सल्लाह अनुसार किसानमैत्री नीति निर्माण गरेर त्यसै अनुसार अघि बढने हो भने उहाँले नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी पालन क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ । उहाँले गर्नु भएका राम्रा काम इतिहासका पानामा लेखिएला । होइन, ठूला उद्योग व्यापारीको मात्रै कुरा सुनेर अघि बढ्नु भयो भने त्यो पनि इतिहासले मूल्यांकन गरि नै हाल्छ ।
अन्त्यमा यस क्षेत्रका व्यवसायी साथीहरुलाई तपाइँ के भन्न चाहनु हुन्छ ?
पोल्ट्री क्षेत्र असाध्यै रमाइलो व्यवसाय हो । लागु औषधको रुपमा पाइने स्मेक खाने बानी र पोल्ट्री व्यवसाय गर्ने बानी दुबै उस्तै जस्तो लाग्छ मलाई । यो व्यवसायको दलदलमा फसेपछि निस्किन सारै गाह्रो हुन्छ । कि यो व्यवसायमा आउँदै नआउनु आउने हो भने राम्रो बनेर निस्किन सक्यो भने ठिक हुन्छ । नत्र धैर्य गर्न नसक्ने दुई वर्ष काम गर्ने छोड्ने गर्नका लागि यो व्यवसायमा नआउँदा राम्रो हुन्छ । भ्याली कोल्ड स्टोरका सञ्चालक स्वर्गीय श्रीकृष्ण घिमिरेले मलाई भन्नु भएको थियो– ‘अञ्जन बाबु यो व्यवसायमा आउने हो भने पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण, आकाश–पाताल सबैतिर हेरेर मात्रै आउनु पर्छ ।’ म उहाँको त्यो अर्ती अहिले सम्झिरहेको छु । दिगो र टिक्ने गरी यो व्यवसायमा आउनेले राष्ट्रकै लागि केही योगदान गर्न सक्छ । पैसा त जति कमाए पनि कसैलाई कहिल्यै पुग्दैन । यस व्यवसायका व्यवसायीले आम नागरिकलाई प्रोटिनको मुख्य स्रोत अण्डा र मासु उपलब्ध गराउन सकेका छन् । यो क्षेत्रले देशकै नागरिकको पोषणमा योगदान गर्न सकेका छ । यसमा पनि सन्तुष्ट हुने प्रशस्त ठाउँ छ ।
Previous articleकृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने व्यवस्था फिर्ता लिन माग गर्दै व्यवसायीले बुझाए ज्ञापन
Next article‘नन्दिनी एग्राेले केमिकलरहित अर्ग्यानिक दाना बनाउँछ’
छाडा साँढेमाथि खुकुरी प्रहार
कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा विदेशी लगानीविरूद्ध यस क्षेत्रका व्यवसायीद्वारा संयुक्त आन्दोलन...